News Missile » १६ बर्षपछि प्रधानमन्त्री देउवाको दिल्ली दौडाह
१६ बर्षपछि प्रधानमन्त्री देउवाको दिल्ली दौडाह
Thursday, August 24th, 2017 at 12:42 pm By:SANU RAJA PURI Blogs, Highlighted News 321 Views
सानुराजा पुरी/काठमाडौ । पाँच दिने राजकीय भ्रमणकाको लागि प्रधानमन्त्री शेर वहादुर देउवा ५९ सदस्य नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै बुधबार मध्यान्ह नयाँ दिल्ली पुग्नु भएकोछ । प्रम देउवालाई इन्दिरा गान्धी अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजले स्वागत गर्नु भएको थियो। नेपाल सरकारले भारत भ्रमणका ऐजेण्डा तय गरेर भारत भ्रमणमा रहेका प्रम देउवा र उनका समकक्षी भारतीय प्रम मोदीले आकस्मिक रुपमा बुधवार नै भेटघाट गरेका छन् ।
भारतको पाँच दिने राजकीय भ्रमणमा रहेका प्रम देउवाले बुधवार भारतीय उघोग बाण्ज्यि संघको कार्यक्रम, नेपाली दुतावासको कार्यक्रम लगायतमा सहभागी भएका प्रम देउवालाई बुधवार साँझ दिल्लीस्थित सेभेन रेसकोर्स रोडस्थित सरकारी निवासमा भारतीय प्रम मोदीले सरप्राइज भेटघाट गरेका छन्। भ्रमणको कार्य तालिकामा भारतीय प्रम मोदीसंगको भेटघाट बिहिवार विहान मात्र रहेको छ।
यस भेटका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराईले भने भारत सरकारले यस भ्रमणलाई उच्च प्राथमीकता दिएको कारण प्रम मोदीको भेटलाई लिनुपर्ने बताउनु हुन्छ । प्रम मोदीले आफनो ट्वीट मा दुवै देशका प्रमको फोटो एव असल छिमेकी देश नेपालका प्रम देउवालाई स्वागत गर्न पाउँदा खुशी लागेको छ। भारतीय प्रमको यस प्रकारको भेटलाई नियमित आकस्मिकता भएको, यो नौलो विषय नभएको परराष्ट्र मामिलाका जानिफकारहरु वताउँदछन।
प्रम देउवाले विहिवार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री एव अन्य मन्त्रीहरुलाई भेटने कार्यक्रम रहेकोछ। यस भ्रमणमा नेपाल–भारत बीच चार सम्झौता एव सम्झदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । भूकम्पपछिको पूर्ननिर्माण, लागू औषध नियन्त्रण, निर्यात सामानको गुणस्तर जाँच र मेची पुलको स्तरोउन्नतीको विषयमा सम्झौता हुनेछ। नेपाल–भारत दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले कटैया कुशाह–रक्सौल–परवानीपुर ५० मेगावाट विद्युत प्रसारण लाईनको हैदरावाद भवनबाट रिमोट मार्फत उद्घाटन गर्नुहुनेछ।
प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा केही सहजता र धेरै असहजताहरु रहेकोछ । सविधानको संशोधन, भारतीय बाँधका कारण नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तराईका भू–भाग डुबानमा भएको अवस्थाले भ्रमणमा धेरै असहजता एकतर्फ रहेका छन् भने अर्को तर्फ दुई ठुला छिमेकमा दोक्लाम विवादको चपेटामा नेपालको भूमिका कस्तो हुने भन्ने विषय अर्को तर्फ रहेको छ । यस भ्रमणमा बहुप्रतिक्षित र विवादास्पद पञ्चेश्वर आयोजनाको डिपिआर तयार गर्ने विषयलाई भारतीय पक्षले छलफलको एजेण्डा बनाउने देखिएको छ।
कुटनीति कुटीलतामा माहिर प्रम मोदीले नेपालले उठाउने ऐजेण्डालाई भारतीय हितमा हुनेगरी नै छलफल अगाडि बढाउने निश्चित छ। नेपाली पक्षले महाकाली सन्धिका सैद्धान्तीक पक्ष, सन् १९५० को असमान सन्धि, विगतमा भएका सन्धि, सम्झौताको पुनरावलोकन, भारतले सीमा क्षेत्रमा बलजफ्ती बनाएका बाँधहरु वा सडकले नेपाली भूमि डुवान गरेको विषय एवं जल्दोवल्दो समस्याको रुपमा रहेको लिपुलेक प्रकरण र भारत–चीनको तिक्तताको रुपमा रहेको दोक्लाम समस्याको विषयमा छलफल होला कि?
प्रम देउवाले वि.स.२०५८ सालमा भारत भ्रमण गर्दा दुवै देशको संयुक्त वक्तव्यमा डुबान समस्या समाधानका लागि बाँधहरु भत्काउने वा संरचना परिर्वतन गर्ने, सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने विषयमा आज १६ बर्ष पछि पनि जिउँ का तिउँ रहेको तर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
भारतले नेपाललाई दया, राहत होइन साथ चाहिएको विषयमा प्रम देउवाले प्रष्टसंग कुरा राख्न सक्लान त? अन्यथा कुनै देशको राजदुतले ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश गर्न गएको जस्तो, नभएर नेपालमा प्रधानमन्त्री हुने वित्तिकै भारतलाई रिझ्याउन भ्रमण गर्ने परम्पराको निरन्तरता मात्र हुने हो।
पुरानै परम्परावादी सोचलाई निरन्तरता स्वरुप भ्रमणको अन्त्यमा संयुक्त वक्तव्य आउने, र केहि पनि काम कार्यान्वयन नहुने अवस्था आएमा यो भ्रमण पनि कर्मकाण्डी र परम्परागत धान्ने मात्र हुनेछ। आशा गरौ हामी माग्न गएका होइनौ सार्वभौम सत्ता देशको प्रमको राजकीय भ्रमण सार्थक बनाउन सक्नुपर्दछ।